काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना आज बिहान राजधानी आइपुगेका छन् ।
काठमाडौँ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओ चा आज काठमाडौँ आइपुगेका थिए।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौं आइपुगे
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज बिहान राजधानी आइपुगेका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्वागत गरे । विशिष्ट पाहुना मोदीलाई नेपाली सेनाको एक टोलीले सम्मान गारतका साथ स्वागत गरेको थियो ।
तारकेश्वर नगरपालिकाकाद्धारा सबै कर बृद्दिको निर्णय फिर्ता
तारकेश्वर नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यकाल करिब १८ महिना पुरा गरि सक्दा पनि साबिक कर्मचारीले चलाएको नगरपालिका भन्दा अझै अब्यबस्थित र ग़ैरज़िम्मेवार भएको भन्दै बिरोध र्याली एवंम कोण सभा गरिएको छ । बुधबार तारकेश्वर स्थीत जरङ्गकु बाट जुलुस सुरु भई लामबगर , धर्मस्ली हुदै नगरपालिका अगाडी कोण सभामा परिणत भएको पछि । नेपाली कांग्रेस तारकेश्वर नगर समितिको अगुवाइमा आयोजा गरिएको सो बिरोध प्रर्दशनमा नागरीक समाज , तारकेश्वरका स्थानिय बासिन्दा लगायतका ठुलो संख्यामा उपस्थिीती रहेको थियो ।
मन्त्रीले नै गोली पड्काउँछन्, बलात्कार गर्छन् तर त्यस्ता समाचार हामीले लेख्न किन नपाउने ? पत्रकार विष्णु प्रसाईं
आजबाट बिम्स्टेक सम्मेलन, ७ देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको सहभागिता
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेकको)चौथो शिखर सम्मेलन आजबाट काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । आज विशेष समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिम्स्टेकको उद्घाटन गर्दैछन् । बिम्स्टेकको सम्मेलनको लागि सात देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता रहने छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले बुधबार बाजेको सेकुवाका शाखाको सिलबन्दी र ब्राण्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
हुलाक टिकट हिनामिना गरेको अभियोगमा तिल बहादुर राई जेल चलान
काठमाडौं । सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वार्ड नं. ९ साबिक (लोखिम गा.बि.स.) का तिल बहादुर राईलाई सार्वजनिक हुलाक टिकट हिनामिना गरेको अभियोगमा जेल चलान गरिएको छ ।
रत्ननगर । नारायणी र राप्ती नदीमा घडियाल गोही जोगाउन मध्यवर्ती क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई माछापालनमा सहयोग गरिएको छ ।
चाबहिलस्थित बौद्ध चैत्य सरसफाइ
काठमाडौँ । चाबहिलस्थित बौद्ध चैत्यको दर्शनका लागि श्रीलङ्काली राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना आउने भएपछि आज विशेष सरसफाइ गरिएको छ ।